အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝကဒီမှာ! — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
အကြှနျုပျ၏စတုတ္ထတစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်, "ဒီကောင်းမွန်သောဘဝ” တရားဝင်ဖြန့်ချိခဲ့! iTunes မှအယ်လ်ဘမ် Buy ဒီမှာ. သင်တို့သည်လည်း Lifeway မှာစတိုးဆိုင်များတွင်အယ်လ်ဘမ်ကိုတက်ခူးနိုင်, မိသားစုခရစ်ယာန်, Mardel, နှင့်ပစ်မှတ် & Wal-Mart (စတိုးဆိုင်များကို select လုပ်ပါ).
လည်း, သငျသညျငါအကောင်းပေါ့ "အတှကျဗွီဒီယိုအသစ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်” Lecrae featuring ဒီမှာ. ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီရပ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အသိပညာပေးနှင့်ယုံကြည်သူများအားပေးဖို့ဒီတစ်ခုပေါ်တွင်အာဇာနည်နေ့၏အသံနှင့်အတူပူးပေါင်း.
Charlene I'maCharity Hamilton • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:45 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
One more thing Trip, do you have any suggestion on how to break into the biz, I love singing for the Lord and would loved to be used inamighty way to share the gospel through my music. ဒါပေမဲ့, if that’s not my assignment I understand because I just want to live in the perfect will of GOD not mine! ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ! :: D
Mikeyla Victoria Arellano • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:46 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Charlene I'maCharity Hamilton • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:46 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
I absolutely love this album thank you for making music that glorifies the lord, and is enjoyable to listen to for the youth. I’masingle mother of4အသက်အရွယ်မရွေး 16, 14, 11, နှင့် 4! I listen to your music along with various other artist in hopes that it will help me to share the gospel with my children and show them that beingafollower of Christ isn’t boring lolz and not just old people are saved. Not saying I’m old, I still consider myself young and prefer to listen to hip hop, and neo soul. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်,just want to say thank you for allowing God to use you and your talent to Bless and reach so many people of all ages and races. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ
ဒံယလေက • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:46 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Praise the Lord bro, I just want to stop by at your page and advise you that everything your doing is for the honor and glory of our savior Jesuchrist!!! Bro in Jesus name i declare blessings for you, your family and your music in which isavery beautiful form to express Jesus’s all mighty love, သနားခြင်းကရုဏာ, စွမ်းအား, and what he did for us. Stay up, faith up and hey…maybe we can makeatrack together cause I declare to seek for my gift in which Jesus has given to me; ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ, အာမ.
Mikeyla Victoria Arellano • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Humdaddy • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Jannett • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
I remember asakid praying foraChristian rap artist so that I would have music to listen to. It’s not often that I hear the gospel as more than just the things God can give you or that if you don’t have things it’s good cause you still have Christ. Your ministry has beenareal encouragement and I love the theme of your album. သင်တို့အဘို့ဆုတောငျးလကျြ
Ed McCrae • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်